Nhau - Ungachengetedza sei musoro weprinta zvine musoro?
Sechinhu chepakati cheiyo inkjet yekudhinda muchina, kugadzikana kwemusoro wekudhinda zvisina kunangana kunoona mhando yemuchina. Kana iyo yakamisikidzwa mutengo yemusoro wekudhinda iri mudenga, maitiro ekuwedzera hupenyu hwebasa remusoro wekudhinda, kudzora mutengo wekutsiva uye degree rekupfeka, uye chengetedza musoro wedhinda nemazvo. Izvo zvakakosha kune kushambadzira zvitoro uye kugadzirisa vanoshanda! Wese munhu haasi mweni kudhinda misoro.
Sechinhu chepakati cheiyo inkjet yekudhinda muchina, kugadzikana kwemusoro wekudhinda zvisina kunangana kunoona mhando yemuchina. Kana iyo yakamisikidzwa mutengo yemusoro wekudhinda iri yepamusoro, maitiro ekuwedzera hupenyu hwebasa remusoro wekudhinda, kudzora mutengo wekutsiva uye nedhivha yekupfeka, Kugadzikana kunonzwisisika kweinkjet yekudhinda mishini yemabhomba yakakosha kwazvo kushambadza zvitoro uye vanogadzira vanoshanda!
Inki yemuchina wekudhinda weinkjet
Inki uye kamwene ndizvo zvinhu zviviri zvakakosha zvekudhinda kwakajairika kwemuchina wekudhinda weinkjet uye goho rakatsiga remufananidzo. Idzo mbiri dzinofambidzana uye dzinokosha. Naizvozvo, kuchengetedza iyo kamwene mune yakanakisa kudhinda mamiriro, pane zvimwe zvinodiwa zveiyo mhando mhando uye mashandiro maitiro emainjeti yekudhinda muchina.
1.Kurambidzwa kwekusanganisa: Kune akawanda maaki emaki pamusika, uye iyo inki solvent kuumbwa kunogadzirwa nekambani yega yega kwakasiyana. Iko kusanganiswa kwemhando dzakasiyana uye batchs dzeinki zvinowanzoitika kumakemikari maitiro, izvo zvinogona kukonzera kukanda kwemavara uye kurasikirwa kwemuvara, uye kukonzera kunaya kwemvura kuvhara iyo kamwene, Saka zvinorambidzwa kusanganisa indi neyekunze inki nemainki emhando dzakasiyana.
2.Shandisa yakaderera mhando nekungwarira: Yakaderera inki haina kusvika pamwero mukutsetsenura uye kudzikisira, izvo zvinokanganisa yekupedzisira dhizaini mhedzisiro uye kurongeka kuzviisa. Makuru pigment zvidimbu zvinogona kupisa zviri nyore kamwene uye kukonzeresa kupfeka nekudyiwa, saka usachive yakachipa yeinoshoreka inki, Nekuti iyo diki kurasikirwa haina kukodzera kurasikirwa.
3.Sarudza chepakutanga: Zviri nani kusarudza iyo yekutanga inki yemuchina wekudhinda wemuchina, iyo inoedzwa kwazvo nekuyedza uye kushandiswa kwenguva refu. Inoenderana nemusoro wekudhinda weinjet yekudhinda muchina uye wakatsiga uye wakavimbika. Iyo inogadzira inopa yakareba-kwenguva mushure-kutengesa vimbiso. Ndiyo sarudzo yakanakisa yeinki yemuchina wekudhinda weinkjet.
Inkjet yekudhinda muchina unoshanda
1.Shutdown nekuisa chisimbiso: Mushure mekupedza basa remuchina wekudhinda weinkjet, ita shuwa kuti iyo yekudhinda musoro neingi inki zvakabatanidzwa zvakanyanya kupatsanura mweya uye kunyorovesa zvakakwana musoro wekudhinda kudzivirira kuvhara kwemusoro wekudhinda.
2.Power-off protection: Usati watsiva zvikamu kana kuita kugadzirisa pamuchina wekudhinda weinkjet, yeuka kuti iyo inkjet yekudhinda muchina inofanirwa kudzimwa. Usaise kana kukatanura pamadiro.
3.Kubvisa zvinhu zvekunze: Kunze kwekushandisa mapepa, zvinorambidzwa kuisa zvimwe zvinhu zvekune dzimwe nyika papuratifomu yemuchina wekudhinda weinki, izvo zvinokonzeresa pombi panguva yekufamba.
4.Dzivirira magetsi emagetsi: Chitoro chinoshandiswa zvine musoro kudzivirira kusagadzikana uye kugadzirwa kwemagetsi. Mushini unofanirwa kunge wakabatanidzwa pasi usati washandiswa, uye magirovhosi ekudzivirira anofanirwa kupfekwa kana uchibata kamwene.
5.Maintenance: Kana iyo yekudhinda musoro yakaputsika, tanga waona kuomarara kwayo, uye wozoshandisa nzira inoenderana kuigadzirisa. Ita zvishoma nezvishoma panguva yekuchenesa. Usamanikidze jekiseni kuti ikonzere kukuvara kusingaperi kumusoro wekudhinda.
Printer muchina nharaunda
1.Temperature uye mwando: teerera kune tembiricha uye mwando wakakomberedza inkjet yekudhinda muchina. Iyo tembiricha iri 15-30 degrees, uye humidity iri pakati pe40% -60%. Kana nharaunda ikasasangana nezvinodiwa, unogona kumisikidza mamhepo ekugadzirisa, dehumidifiers, bvudzi rinoomesa uye zvimwe zvinoshandiswa Natsiridza nharaunda inoshanda.
2.Voltage kugadzikana: Mune akasiyana siyana makuru-emahombekombe ekugadzirisa mashopu ekushandira, zvinokurudzirwa kumisikidza yakakwira-simba voltage stabilizer kuona yakatsiga magetsi kuburitsa panguva yebasa reinkjet yekudhinda muchina, kuti iyo inkjet yekudhinda muchina unogona yakagadzirwa uye yakagadziriswa zvakanyanya.
3.Reduce guruva: In matsutso, mamiriro ekunze akaoma, mhepo uye zvishoma kunaya, izvo zvinogona kukonzera mhepo, jecha uye guruva. Kumhara kwemukati memhepo hakuna kunaka. Guruva rinopinda mumuromo, bhodhi uye zvikamu zveprinta, zvichikonzera kupindirana kwemagetsi uye nozzle kuvhara. Naizvozvo, tora matanho akakodzera. Matanho ekudzivirira akakosha zvakanyanya.
Ikambani yeYinghe inopa mhando dzakasiyana dzemusoro wekunze wePrinta, senge Epson, HP, Canon, Muto, Ricoh, Xaar, nezvimwe.